Breaking – सोच्नै नसकिने गरि घट्यो प्याजको मुल्य ! – Life Nepali
काठमाडौँ, ७ असोज । कृत्रिम अभाव गराई कालोबजारी गरिरहेका व्यापारीबाट जफत गरेको प्याज सरकारले सर्वसाधारणलाई बेच्ने भएको छ । मंगलबार बसेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलगायतको संयुक्त बैठकले जफत गरिएको प्याज बिक्री गर्ने निर्णय गरेको हो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ । *** भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
Previous Breaking – सोच्नै नसकिने गरि घट्यो प्याजको मुल्य !
Next वैदेशिक रोजगारमा विदेश गएका नेपालीहरुका लागि सरकारबाट आयो अत्यन्तै खुसिको खबर !